उत्तर कोरियाली लीडर किम जोनको टाउकोमा पट्टी, कसरी लाग्यो उनलाई टाउकोमा चो ट ? – Jagaran Nepal
उत्तर कोरियाली लीडर किम जोनको टाउकोमा पट्टी, कसरी लाग्यो उनलाई टाउकोमा चो ट ?
एजेन्सी । उत्तर कोरियाका सर्वोच्च नेता किम जोन उन उनको कडा नियम र शैली को लागी निकै चर्चित छन् । तर धेरै पटक उनी आफ्नो स्वास्थ्य को बारे मा हेडलाइन्समा आउँछन् । । किम जोन उन का केहि तस्बिरहरु भाइरल भैरहेका छन्, जसका कारण फेरी उनको स्वास्थ्यलाई लिएर अनुमानहरु लगाइन थालिएको छ ।
एनके न्यूजको रिपोर्ट अनुसार किम जोन उन २४ जुलाई र २७ जुलाई को बीच सैन्य बैठक मा देखिएका थिए। यस बाहेक, २७ र २९ को बीचमा, उनी एक सेना कार्यक्रम मा देखिएका थिए । देशको सेना को अधिकारीहरुलाई सम्बोधन गर्दै थिउ । यी कार्यक्रमहरु को दौरान, किम जोंग उन को टाउको पछाडि एक पट्टी देखीएको थियो।
यस रिपोर्टका अनुसार यी घटनाहरु बाट किम जोन उन का केहि तस्बिरहरु भाइरल भएका छन् जसमा उनको टाउको पछाडि एउटा सानो पट्टी बाँधिएको छ। यस बाहेक उनको टाउकोमा चो टका निशानहरु पनि छन्। यो पट्टी को बारे मा भनिएको छ कि यो यति सानो छ कि यो एक डाक टिकट जस्तै देखिन्छ। यस बाहेक, यो रिपोर्ट मा यो पनि भनिएको छ कि उनको टाउको मा गाढा हरियो धब्बाहरु देखीएको थियो।
यद्यपि किम जोन उनको टाउकोमा लागेको चो ट पब्लिसिटी स्ट न्ट मात्र हो वा उनी साँच्चै गम्भीर चो ट लागेको छ भन्ने कुरा अझै स्पष्ट भइसकेको छैन। उल्लेखनीय कुरा यो छ कि यो रिपोर्ट मा यो पनि लेखिएको छ कि किम जोन उनको टाउको मा यो निशान जून २९ पछि जारी तस्वीरहरुमा देखिएको छैन।
गत महिना उत्तर कोरियाको राज्य च्यानल केसीटीभीले एक आम नागरिकलाई उद्धृत गर्दै दाबी गरेको थियो कि जब किम जोन उनको कम वजनको तस्वीर भाइरल भयो, उनी धेरै भावुक भए। उत्तर कोरियामा धेरै मानिसहरु आफ्नो नेता को हालत को बारे मा धेरै चिन्तित भए।
खर्च जुटाउन रेष्टुरेन्टमा काम गर्छिन् अमेरिकी पुर्वराष्ट्रपति ओबामाकी छोरी सासा
५०० बाट सुरु गरेको ब्यापारले मुकेशलाइ बनायो ५० अरब डलर सम्पत्तिका मालिक